Izindaba - Ulayini owengeziwe we-PA 6.6 base polymer uqala eShanghai
Isigebenga senayiloni lase-US Isimemo (Wichita, Kansas; www.invista.com) ithe ikhulise amandla ayo e-polyamide 6.6 base polymer eShanghai Chemical Industry Park (SCIP) ngo-40,000 t / y. Ulayini owengeziwe uqalile ukusebenza futhi uletha umthamo ophelele esizeni ku-190,000 t / y, ama-30,000 awo atholwe ngokuzenzakalela ngenkathi okunye kungumkhiqizo oqhubekayo. Eminyakeni embalwa edlule, eyokugcina ikhulisiwe.
Ngokusho komqondisi wesifunda sika-Invista U-Angela Dou, inkampani yase-US isabela ngokwanda okulindelekile kwesidingo sasekhaya. Izibikezelo zangaphakathi zibona izinhlelo zokusebenza ezifana nezimoto, i-R & D, ukwakhiwa okulula kanye nokuzenzekelayo njengamandla amakhulu okushayela.
Kuze kube manje, i-Invista ibikhiqiza i-hexamethylenediamine (HMD) ephakathi nendawo eShanghai, ngaphezu kwe-PA 6.6. Kusukela maphakathi no-2020, inkampani ibilokhu yakha isitshalo somkhiqizo ophakathi ne-ADN (bona iPlasteurope.com ka-25.06.2020). Ukukhiqizwa kuhlelelwe ukuqala ngo-2022 ngomthamo wama-400,000 t / y.